सीमा ०० मा प्रत्यक्ष: सीमाहरू बनाम अमेजन ईमेल मार्केटिंग | Martech Zone
बिहीबार, अप्रिल 5, 2007 शुक्रबार, जनवरी 12, 2018 Douglas Karr
यदि तपाईं वरिपरिको सिमाना स्टोर छैन भने, मलाई माफ गर्नुहोस्। यदि तपाइँ गर्नुहुन्छ भने, तपाइँलाइ यो साइट मनपर्न सक्छ जुन बोर्डर्सले सुरु गरेको छ, बोर्डरहरू ०० लाईभ:
वाह ... किताबहरू, प्रत्यक्ष संगीत र सिएटलको सर्वश्रेष्ठ कफी! त्यो मेरो लागि स्वर्ग जस्तो छ!
यो पनि देखिन्छ कि किनाराहरू ईमेल न्यूजलेटर एक ओवरहाल हो, यो अब पढ्न रमाईलो छ। बोर्डरहरू निश्चित रूपमा ईमेल युद्ध जित्दैछन्! यस तुलनालाई हेर्नुहोस् अमेजनको इमेल:
टैग: अमेजनसीमानाहरूईमेल डिजाइनईमेल निजीकरण
परामर्शदाता, ठेकेदार र कर्मचारीहरू: हामी कहाँ जाँदैछौं?
अप्रिल 5, 2007 मा 10: 36 एएम
तपाईंको लेआउट परिवर्तनले तपाईंको ईमेल न्यूजलेटर / वेब साइटका लागि के गर्न सक्दछ यो आश्चर्यजनक छ। यसले तपाईंलाई ब्लाहबाट रोमांचकमा लैजान सक्छ! उनीहरूले ठूलो काम गरे!
अप्रिल 6, 2007 मा 7: 18 एएम
म सहमत छु उनीहरूले राम्रो काम गरे! म कफी लगभग गन्ध लाग्न सक्छ। उफ जुन मेरो भान्छामा! ठिकै हो, मँ विचार लाई माया गर्छु!